Daawo Sawirada:- Qad tareen isku xiraya Jabuuti iyo Itoobiya oo la furay - Hablaha Media Network
Daawo Sawirada:- Qad tareen isku xiraya Jabuuti iyo Itoobiya oo la furay
HMN:- Waxaa markii ugu horeysay taariikhda la furay tareen koronto ku shaqeynaya oo isku xirayo dalalka Itoobiya iyo Jabuuti, kaasoo fududeyn doono safarka labada dal iyo ganacsiga.
Tareenkaan oo saacadii ku ordi doono xawaare dhan 120 km saacadii. Mashruucaan oo socday mudo sanado ah ayaa waxaa maal geliyay bankiga wax dhoofinta iyo dejinta ee Shiinaha.
Madaxda labada dal ayaa furitaankii qadka tareenkaan cusub ka qeybgalay, waxayna sheegeen in jidka cusub ee tareenku uu sii xoojin doono xiriirka ganacsiga ee ka dhaxeeya labada dal siina kobcin doona.
Itoobiya oo alaabooyinka kala soo degta 90% dekadda Jabuuti kana dhoofsataa, iyadoo ay ku qaadan jirtay mudo seddax maalmood ah gaadiidka inta u dhaxeysa Addis Ababa iyo Djabuuti.